Puntland Mirror, Author at Puntland Mirror Believable Media Website - Page 2 of 84
June 1, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa shaqada ka ceyriyay dhammaan ciidamada ammaanka ee kantaroolka koonfureed ee magaalada Garoowe, sida ilo-wareedyo ku dhow wasiirka ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Arrintan ayaa […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka amniga Puntland Cabdi Xisri Cali Qarjab ayaa sheegay in xilka laga qaadi doono taliyaasha kantaroolada uu soo maray gaari qarax siday oo lagu qabtay kantaroolka Boosaaso. Wareysi ay la yeelatay idaacada maxaliga […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in uusan wax mushahaar ah qaadan tan iyo markii la doortay, Wareysi gaar ah oo uu siiyay wargeyska Sharq Al-awsat Madaxweynaha ayaa la weydiyay in markii […]
May 25, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Islaamiga sidoo kale loo yaqaan Daacish ah ayaa baahisay ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ahaa oo habeenkii Talaadada ka dhacay magaalo xeebeedka Boosaaso, sida ay daabacday wakaalada wararka Daacish. Sida ay daabacday wakaalada […]
Doha-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay fiidkii tagay dalka Qatar kadib markii uu martiqaad ka helay Amiirka dalkaas Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Madaxweynaha soomaaliya ayaa la filayaa in uu kulamo la […]
May 24, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen shilal baabuur oo ka dhacay wadada laamiga ah ee u dhaxaysa magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso. Shilalka ayaa dhacay gelinkii dambe […]
May 21, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Abaanduulaha ciidamada Soomaaliya Janaraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa sheegay in ciidamadu ay qaadi doonaan howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. “Howlaha ugu muhiimsan waxa weeye in la qaado […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s armed forces commander General Abdullahi Ali Anod said the forces will launch an operation against Al-Shabab militants in southern Somalia. “The most important activities are to carry out operations against Al-Shabab terror […]
May 17, 2017 Puntland Mirror 0
Oslo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xalay oo Arbaco ahayd kulan la qaatay jaaliyada Puntland ee ku dhaqan magaalada Oslo ee dalka Norway. Madaxweyne Cabdiweli ayaa jaaliyada uga waramay xaaladaha ka jira […]
May 15, 2017 Puntland Mirror 0
Doha-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gudaha magaalada Dooxa kulamo kula qaatay Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamin bin Hammad Al Thani. Labada hoggaamiye ayaa ka wadaxaajooday xiriirka u dhaxeeya labada dal, sida ay […]
Galkayo-(Puntland Mirror) At least five people have been killed and 10 others wounded in clan-fighting in Mudug region on Monday. According to the residents the fighting was triggered by blood revenge and long-standing hostilities over [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Marti sharaf ka socota Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah timid magaalada Garoowe si ay uga qeybgalaan caleemo-saarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Masuuliyiinta timid ayaa waxaa kamid ah wasiiro, xildhibaano [...]